အဒ်မင်, Best Thrive Freeze ခြောက်သွေ့သောအစားအစာမှစာရေးသူ
ဘဝရှင်သန်မှုအကြားခြားနားချက်, စျေးကွက်ရှင်သန်, နှင့် le-vel ရှင်သန် ဆက်ဖတ်ရန် »
There may be times when you have to stay out foracertain while. Under these circumstance, အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ မင်းနဲ့အတူ စားချင်နေလိမ့်မယ်။. ထုံးစံအတိုင်း, သင်ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများကိုသင်နှင့်အတူသယ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤနေရာသည်အစားအစာသိုလှောင်ရန်အရေးကြီးသည် …
ခြောက်သွေ့တဲ့ရှင်သန်မှုအစားအစာအေးခဲ ဆက်ဖတ်ရန် »
ဒါဟာပိုပြီးသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစာစားခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောယေဘုယျအသိပညာဖြစ်ပါတယ်. သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရှင်သန်စေပါ, antioxidants နှင့်ပြည့်ဝ၏, ဗီတာမင်, ပိန်ပရိုတိန်း, ဖိုင်ဘာ, နှင့်အကြီးအနိမ့်ကယ်လိုရီမုန်ဖြစ်ကြသည်. သင်၏အစားအစာတွင်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပိုမိုထည့်သွင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အကြံပြုချက်များရှိပါသည်. Eating salads is an easy and affordable way to consume …
သင်၏ Thrive Life အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစားရန်နည်းလမ်းများ ဆက်ဖတ်ရန် »
တစ်ဦးရှင်သန်ဘဝအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများမှာဘဝကမ်းလှမ်းမှုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအစားအစာကြီးထွားလာ. အစားအစာဝယ်ယူဒီက high-အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစားအစာစတိုးဆိုင်ရုပ်ပွားတော်၏သင်္ကေတအဖြစ်ယူဆနေသည်. သငျသညျအများကြီးလျော့နည်းအချိန်ရှိဟင်းလျာများအမျိုးမျိုးကိုမြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာပါတီများဤစတိုးဆိုင်ကနေအမိန့်အစားအစာနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများမှစံပြဖြစ်, အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ …
တစ်ဦးရှင်သန်ဘဝအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ ဆက်ဖတ်ရန် »
6 Comments	/ အကောင်းဆုံးအေးခဲခြောက်အစားအစာ, အေးခဲခြောက်အစားအစာရှင်သန် / အားဖြင့် အဒ်မင်
ဘဝကအတိုင်ပင်ခံစေဘယ်လောက်ကြီးထွားလာကြဘူး? ဘဝကအေးခဲအခြောက်အစားအစာအရည်အသွေးမြင့်မားစေသည်ရှင်သန်, ကျန်းမာစားခြင်းနှင့်လူနေမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကြီးမြတ်အရသာနှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်မုန့်ညက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ကြောင်းကျန်းမာထုတ်ကုန်! ဤလူမျိုးကိုနေထိုင်မထိုက်မတန်ကူညီပေးနေများအတွက်ကျန်းမာရွေးချယ်မှုမြှင့်တင်တဲ့အကြီးအနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ချောင်းမြောင်းဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်, နှင့်ယေဘုယျ၎င်းတို့၏အသိတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် …
အတိုင်ပင်ခံအောင်ဘယ်လောက်ကြီးထွားလာကြဘူး? ဆက်ဖတ်ရန် »
ဘဝတစ်ဦးလျင်ကျန်းမာအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများရှာနေသူတို့သည်အလျင်အမြန်ချက်ပြုတ်နည်းလမ်းအားလုံးရရှိနိုင်ပါကိုရှာဖွေပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် recipes ရှင်သန်. ဤရွေ့ကားအမြန်ချက်ပြုတ်နည်းများသင်ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကြောင်းဟင်းလျာများဖန်တီးကူညီပေးနိုင်ပါသည်. သိသိသာသာ, သင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှာဖွေစူးစမ်း start သည့်အခါ, သငျသညျဆက်ဆက်ညစာအဘို့များစွာသောအကြီးအအတွေးအခေါ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်. အကယ်. …
ဘဝချက်ပြုတ်နည်းများရှင်သန် ဆက်ဖတ်ရန် »
ဘဝထုတ်ကုန်ကောင်းစွာစားရှင်သန်ပိုပြီးယနေ့လူလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အရာတစ်ခုခုသည်. သငျသညျကျန်းမာအစားအစာကိုစားချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ပိုမိုအချိန်ရှိသည်မဆိုလိုပါ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစာအတွေးအခေါ်များကိုရှာဖွေနေသငျသညျတှေ့ရ, အစဉ်အမြဲကျန်းမာဖြစ်ကြောင်းအမြန်ချက်ပြုတ်နည်းများပါဝင်သည်တံ့သော. သငျသညျချင်လိမ့်မည်ဟုဟင်းလျာများကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည် …
ဘဝထုတ်ကုန်ရှင်သန် ဆက်ဖတ်ရန် »